Nhau - Beijing Tianhai Cryogenic 12 LNG matangi ekuchengetedza anobatsira Hebei Zaoqiang LNG peak yekuveura chiteshi
LNG Mafuta Matangi eChikepe
LNG Kuzadza zviteshi
Super Makuru Ekuchengetedza Matangi
Trailer tank yeCryogenic Liquid Gases
VT/HT Series Standardized Storage Matangi
VTC/HTC Series Yakamisikidzwa CO2 Kuchengeta Matangi
VTN/HTN Series Yakamisikidzwa LNG Kuchengeta Matangi
Beijing Tianhai Cryogenic 12 LNG matangi ekuchengetera anobatsira Hebei Zaoqiang LNG peak shaving storage station
Munguva yechando ye2017, nzvimbo dzakawanda dziri kuchamhembe kwenyika yangu dzakasangana ne "kushomeka kwegasi". Tichifunga izvi, muna 2018, National Development and Reform Commission neNational Energy Administration vakabatana vakapa "Mafungiro eKukurumidzira Kuvakwa kweGasi Storage Facilities uye Kuvandudza Gas Storage Peak Shaving Auxiliary Service Market Mechanism" (Inonzi " Maonero "), iyo inojekesa mabasa uye zvisungo zvehurumende, makambani ekupa gasi, makambani egasi emadhorobha uye mamwe mapato ane hukama ekuchengetedza gasi peak kuveura. Kuti ikurumidze kuvakwa kwezvivako zvekuchengetedza gasi, "Maonero" anodhirowa "mutsara mutsvuku" wehuwandu hwekuchengetedza gasi emapato ose. Pakazosvika gore ra2020, makambani anotengesa gasi anofanirwa kunge aine gasi rekuchengetera risingasviki gumi kubva muzana yevhoriyamu yavo yegore rekutengesa, uye makambani egasi emumaguta anofanirwa kunge aine gasi rekuchengetera risingasviki 5% rekushandisa kwavo gasi pagore. Panguva imwecheteyo, hurumende dzevanhu vemunharaunda pane kana pamusoro penzvimbo yedunhu Kanenge kuumbwa kwegasi rekuchengetedza simba kwete pasi pevimbiso yeavhareji yezuva nezuva inoda yedunhu rekutonga kwemazuva matatu.
Mukupindura mutemo wenyika, pakati paNyamavhuvhu 2019, Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. yakapinda muchirongwa che12 150m³ peak shaving station station yeHebei Zaoqiang Zhongmu. Iyi purojekiti ine LNG yekuchengetera inokwana 1,800m³, inova yakanyanya peak yekuveura kugona muna 2019. Imwe yezviteshi zvekuchengetedza. Kubva ipapo, rimwe danho rakasimba rakatorwa kune chinangwa che "gasifying Hebei".
Iyo LNG emergency peaking station inowanzo chengeta LNG, uye inoona gasi uye kutapurirana kana gasi richishandiswa mupombi network panguva dzepamusoro. Iyo inowanzo kuve yakashongedzerwa neLNG cryogenic matangi ekuchengetera, vaporizer, kudzvanya kudzora uye metering skids, nezvimwewo, izvo LNG matangi ekuchengetedza ndiwo akanyanya muzviteshi zvekukurumidzira. Imwe yemidziyo yakakosha.
Iwo 12 150m³ matangi ekuchengetera nguva ino ese akagadzirwa uye akapihwa neBeijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. Iyo yakachengetwa liquefied natural gas (LNG) inogona kushandiswa senzvimbo dzekukurumidzira uye yekuveura gasi peak munguva yechando, iyo inogona kunyatso kudzikisa kushomeka. yegasi rechisikigo panguva yepamusoro yekushandiswa kwegasi munharaunda munguva yechando. Nekukurumidza kusimukira kwehupfumi uye kusimbisa kwenyika pakuchengetedza kwezvakatipoteredza, kudiwa kwegasi rechisikigo kuri kuwedzera zuva nezuva. nyika yangu yakaunza nguva itsva yekuvandudza LNG. Maitiro ekuita basa rakanaka muLNG emergency peak shaving station yave nyaya nyowani yatinosangana nayo.
Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd. inogadzira pasirese inyanzvi mukugadzirwa kwemhepo yakakura ine liquefied, liquefied natural gasi (LNG), liquid carbon dioxide uye imwe cryogenic kuchengetedza uye zvekufambisa. Zvigadzirwa zvaro zvinosanganisirawo akasiyana cryogenic matangi midziyo uye yemugungwa LNG cryogenic yekuchengetedza Matangi, uye ine hupfumi hwekuita uye ruzivo rwekugadzira chigadzirwa mumatangi ematangi nematangi emugungwa. Iyo yegore yekugadzira kugona inogona kuwana anopfuura 2500 ekuchengetedza matangi eakasiyana zvirevo. Iyo kambani ine certification yepasirese uye yepasirese mashandiro manejimendi ruzivo uye huwandu hwakasiyana hwekugadzirisa michina; inogona kugadzira zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinoenderana nemamiriro epamba uye ekunze.
Beijing Tianhai Cryogenic Co., Ltd. inogona kugadzira matangi ekuchengetedza akagadzika kubva pa1m³ kusvika pa500m³. Ita shuwa yekupindura zvakasimba uye nekutsigira kutsunga kwenyika kumisa nzvimbo yekuchengetedza peak yekuveura ndebvu! Kurumidzai kusimudzirwa kwegasi-ku-marasha uye maindasitiri uye ekutengesa marasha-kune-gasi mapurojekiti kuti ape zvipo mukuzadzikiswa kwemvura yebhuruu uye denga rebhuruu renyika yaamai.
Kupa vatengi zvigadzirwa zvakanakisa uye zvemhando yepamusoro masevhisi ndicho chinangwa cheBeijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd., uye kuenderera mberi kwekuvandudza kuzadzisa zvinotarisirwa nevashandisi ndicho chinangwa chebasa cheBeijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd.
Nguva yekutumira: Jun-02-2021
Beijing Tianhai Cryogenic Equipment Co., Ltd.
© Copyright - 2010-2022: Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.